अन्तराष्ट्रिय – जलजला अनलाइन
दक्षिण कोरियाले गर्यो यस्तो अचम्मको चमत्कार
चैत ७, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका होटलका कोठाहरुमा गोप्यरुपमा क्यामरा जडान गरेर १६ सय व्यक्तिको अश्लील गतिविधि रेकर्ड गरेको पाइएको छ । यो काममा संलग्न भएको अभियोगमा चार जना पुरुष पक्राउ परेका छन् । बीबीसीसँग कुरा गर्दै कोरियाका प्रहरीले भनेका छन् यी चार व्यक्तिले अगष्ट महिनामा दक्षिण कोरियाका १० शहरमा ३० वटा अलग-अलग होटलमा १ […]
Posted on March 21, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on दक्षिण कोरियाले गर्यो यस्तो अचम्मको चमत्कार
Posted on March 18, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on ‘काठमाडौ आउँदै गरेको हवाईजहाज मुम्बईको आकाशमा एयर फ्रान्सको वोइङसँग झण्डै जुधेन’
चैत १, काठमाडौं । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि स्वीडेनकी एक स्कुले किशोरी पनि मनोनयनमा परेकी छन् । ग्रेटा थन्बर्ग नाम गरेकी बालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभियान जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएवापत मनोनयन सूचीमा राखिएको हो ।नर्वेका तीन जना सांसदले उनलाई मनोनित गरेका हुन् । यदि उनले जितिन् भने पाकिस्तानकी मलाला युसाफजाईको रेकर्ड तोडिनेछ । मलालाले […]
चैत १, काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चस्थित दुई मस्जिदमा भएको गोलीबारीमा थुप्रै हताहत भएको पुलिसले जानकारी दिएको छ । डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार २८ वर्षे अष्ट्रेलियाली नागरिक मानिएका एक व्यक्तिले अन्धधुन्ध गोली चलाई २७ जनाको हत्या गरेका छन् । प्रहरीले यसबारे आधिकारिक संख्या दिएको छैन । प्रत्यक्षदर्शीले ती बन्दुकधारीले क्राइस्टचर्चस्थित अल नुर मस्जिदमा ५० सट गोली […]
चैत १, काठमाडौं । साउदी अरबले पछिल्लो तीन वर्षमा यमनमा अमेरिकी हतियारको दममा युद्ध जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रका अनुसार यो युद्धका कारण ८० लाख भोकमरीको स्थितीमा पुगेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प जबदेखि सत्तामा आएका छन्, साउदी युवराज सलमानले उनीसँग नजिक भएर उनको विश्वास जित्न सफल भए । जसका कारण अमेरिका जमाल […]
फागुन २८, सिंगापुर । इथियोपियन एयरलायन्सको जहाज दुर्घटनापछि संसारभरिका विभिन्न एयरलाइन्सले अमेरिकी जहाज निर्मता कम्पनी बोइङको ७३७ म्याक्स ८ मोडलका जहाजको उडान रोकेका छन्। पछिल्लो समय सिंगापुरले पनि उक्त मोडलका जहाज नउडाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार आदिसअबाबाबाट केन्याको नैरोवीका लागि उडेको इथियोपियन एयरलायन्सको बोइङ ७३७ म्याक्स ८ जहाज टेकअफ गरेको ६ मिनेटमै दुर्घटनामा परेको थियो। […]
Posted on March 12, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on इथियोपियन एयरलायन्स दुर्घटनापछि विश्वभर फैलियो यस्तो अचम्मको त्रास
फागुन २७, काठमाडौँ । चीनले आफ्ना सबै घरेलु विमान सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई बोइङ ७३७ म्याक्स ८ विमानहरुलाई तत्कालै ग्राउन्ड गर्न निर्देशन दिएको छ । यही मोडलको विमान आइतबार इथियोपियामा र केही समयअघि इन्डोनेसियामा दुर्घटना भएपछि चीनले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । दुई दुर्घटनामा देखिएको ‘समानता’ लाई औल्याउँदै चीनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्थानीय समयअनुसार सोमबार साँझ […]
Posted on March 11, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on इथियोपियन एयरलाइन्स दुर्घटनापछि चीनले गर्यो यस्तो आकस्मिक निर्णय
इथियोपियन एअरलाइन्स भन्छ: विमान दुर्घटनामा एक नेपाली पनि परे
फागुन २६, काठमाडौं । आइतबार केन्यामा भएको इथियोपियन एअरलाइन्स दुर्घटनामा एक नेपाली पनि परेको इथियोपियन एअरलाइन्सले जनाएको छ। विमान दुर्घटनाबारे ट्‍विट गर्दै एअरलाइन्सले दुर्घटनामा ३२ देशका नागरिकले ज्यान गुमाएका उल्लेख गरेको छ। एअरलाइन्सको ट्‍विटमा एक नेपाली नागरिकले उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको उल्लेख छ। नेपाली नगारिकको मृत्यु भएको बारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। इथियोपियाको राजधानी अदिस […]
Posted on March 10, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on इथियोपियन एअरलाइन्स भन्छ: विमान दुर्घटनामा एक नेपाली पनि परे
के पक्राउ परेका पाइलटले फेरि लडाकु विमान उडाउन पाउछन ? वायुसेना प्रमुखले दिए यस्तो जवाफ
फागुन २०, काठमाडौँ । भारतीय वायु सेनाका प्रमुख बीएस धनोआले बालाकोटमा गरिएको हवाई आक्रमणका बारेमा सोधिएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले पुलवामा हमलापछि गरिएको हवाई आक्रमणसँग जोडिएको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । यस क्रममा उनले विंग कमाण्डर अभिनन्दनले फेरि उडान भर्ने बारे पनि जवाफ दिए । अहिले अभिनन्दनको स्वास्थ्य […]
Posted on March 4, 2019 March 4, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on के पक्राउ परेका पाइलटले फेरि लडाकु विमान उडाउन पाउछन ? वायुसेना प्रमुखले दिए यस्तो जवाफ